မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို သွားပြိုင်နေရတဲ့ သက်ထားသူဇာကို အားပေးကြပါအုံ …..း – GuGuGarGar
ကျနော် တို့ မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ အချစ်တော် မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင်မယ်လေး သက်ထားသူဇာဟာ လတ်တလောယှဉ်ပြိုင် ပြီးခဲ့တဲ့ INDIA INTERNATIONAL CHALLENGE 2019 ပြိုင်ပွဲမှာ တတိယဆုကို ရယူပြီး မြန်မာ့ဂုဏ်ကို ဆောင်ခဲ့ပါတယ်…. တိုကျို အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ ဝင်နိုင်ဖို့ ကမ္ဘာ့အဆင့် တက်ရေး ကြိုးစားနေတဲ့ သက်ထားသူဇာဟာ အနားယူမှုတွေမလုပ်ဘဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို နိုင်ငံတကာက ပြိုင်ပွဲတွေ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဆုတံဆိပ်တွေရယူကာ အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ ဂုဏ်ကို ဆောင်နေသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ခုလည်းပဲ ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုပြီးတာနဲ့ အနားမယူဘဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို နောက်ထပ်နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်…အဲတာကတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ့် SYED MODI INTERNATIONAL BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2019 ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်….
ပြိုင်ပွဲ ကိုတော့ နိုဝင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့ကနေ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီပြိုင်ပွဲကို တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲ ကမ္ဘာ့အဆင့်ရှိတဲ့ ကြက်တောင်မယ်တွေလည်း ဝင်ပြိုင်ကြမှာပါ…. ဒါကြောင့် ဒီပြိုင်ပွဲဟာ အရမ်းကို ခက်ခဲမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ သက်ထားသူဇာ ကိုလည်း ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေ တခဲနက်အားပေးပြီး အားပေးစကားတွေ ပြောဖို့ လိုပါတယ်….
သက်ထားသူဇာ ကတော့ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာကနေ “ I will try my best!!အကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့ပါမယ်…” လို့ ရေးသားပြီး ပရိသတ်ကြီးကို ကတိပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်နော်….. ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ကမ္ဘာကျော်တွေပါဝင်တာကြောင့် သက်ထားသူဇာ အောင်မြင်မှုရဖို့ ဝိုင်းဝန်းဆုတောင်းပေးပါအုံးနော်…
ကနြျော တို့ မွနျမာပွညျသူတှေ ရဲ့ အခဈြတျော မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျ ကွကျတောငျမယျလေး သကျထားသူဇာဟာ လတျတလောယှဉျပွိုငျ ပွီးခဲ့တဲ့ INDIA INTERNATIONAL CHALLENGE 2019 ပွိုငျပှဲမှာ တတိယဆုကို ရယူပွီး မွနျမာ့ဂုဏျကို ဆောငျခဲ့ပါတယျ…. တိုကြို အိုလံပဈပွိုငျပှဲ ဝငျနိုငျဖို့ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ တကျရေး ကွိုးစားနတေဲ့ သကျထားသူဇာဟာ အနားယူမှုတှမေလုပျဘဲ ဆကျတိုကျဆိုသလို နိုငျငံတကာက ပွိုငျပှဲတှေ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့ပွီး ဆုတံဆိပျတှရေယူကာ အမိမွနျမာပွညျရဲ့ ဂုဏျကို ဆောငျနသေူလေးပဲ ဖွဈပါတယျ…
ခုလညျးပဲ ပွိုငျပှဲ တဈခုပွီးတာနဲ့ အနားမယူဘဲ ဆကျတိုကျဆိုသလို နောကျထပျနိုငျငံတကာပွိုငျပှဲတဈခုကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမယျလို့ သိရပါတယျ…အဲတာကတော့ အိန်ဒိယနိုငျငံမှာ ကငျြးပပွုလုပျသှားမယျ့ SYED MODI INTERNATIONAL BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2019 ပွိုငျပှဲကို ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျသှားမှာဖွဈပါတယျ…. ပွိုငျပှဲ ကိုတော့ နိုဝငျဘာ ၂၆ ရကျနကေ့နေ ဒီဇငျဘာ ၁ ရကျနအေ့ထိ ကငျြးပပွုလုပျသှားမှာ ဖွဈပွီးတော့ ဒီပွိုငျပှဲကို တကယျ့ဒိတျဒိတျကွဲ ကမ်ဘာ့အဆငျ့ရှိတဲ့ ကွကျတောငျမယျတှလေညျး ဝငျပွိုငျကွမှာပါ….
ဒါကွောငျ့ ဒီပွိုငျပှဲဟာ အရမျးကို ခကျခဲမှာ ဖွဈပွီးတော့ သကျထားသူဇာ ကိုလညျး ကနြျောတို့ မွနျမာပွညျက ပရိသတျတှေ တခဲနကျအားပေးပွီး အားပေးစကားတှေ ပွောဖို့ လိုပါတယျ…. သကျထားသူဇာ ကတော့ သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာကနေ “ I will try my best!!အကောငျးဆုံးကွိုးစားခဲ့ပါမယျ…” လို့ ရေးသားပွီး ပရိသတျကွီးကို ကတိပေးထားတာတှရေ့ပါတယျနျော….. ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဒီပွိုငျပှဲမှာ ကမ်ဘာကြျောတှပေါဝငျတာကွောငျ့ သကျထားသူဇာ အောငျမွငျမှုရဖို့ ဝိုငျးဝနျးဆုတောငျးပေးပါအုံးနျော…
Source : THET HTAR Thuzar